विश्वकप छनोट समूह चरणका ११ स्टार खेलाडीको सूचीमा पारस खड्का - nayakhoj24.com
विश्वकप छनोट समूह चरणका ११ स्टार खेलाडीको सूचीमा पारस खड्का
काठमाडौँ !! जिम्बाम्बेमा जारी आइसिसी एकदिवसीय विश्वकप छनोटका लागि भएका खेलहरूमा १० देशमध्ये ६ देश सुपर सिक्समा प्रवेश गरेका छन् भने बाँकी टिम बाहिरिएका छन् ।
दुई समूहमा विभाजित टिमहरूको समूह ‘ए’ बाट वेस्ट इन्डिज, आयरल्यान्ड र युएई सुपर सिक्समा पुगेका छन् भने एक दिवसीय मान्यता प्राप्त नेदरल्यान्ड्स र पपुवा न्युगिनी बाहिरिएका छन्।
समूह ‘बी’ बाट आयोजक जिम्बावे, स्कटल्यान्ड र अफगानिस्तान सुपर सिक्समा पुगेका छन् भने नेपाल र हङकङ बाहिरिएका छन्।
सुपर सिक्समा पुगेका ६ टिम (वेस्ट इन्डिज, आयरल्यान्ड, युएई, जिम्बावे, स्कटल्यान्ड र अफगानिस्तान) मध्ये २ टिमले विश्वकपमा स्थान पक्का गर्नेछन्।
११ खेलाडीमा जिम्बावे र हङकङका २–२ खेलाडी छन् भने आयरल्यान्ड, पपुवा न्युगिनी, स्कटल्यान्ड, नेपाल, युएई, अफगानिस्तान र वेस्ट इन्डिजका १–१ खेलाडी छन्। नेदरल्यान्ड्सका कुनै पनि खेलाडी समूह चरणमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने सूचीमा अटाएनन्।
को को हुन् उत्कृष्ट ?
पछिल्लो एक दशकदेखि आयरल्यान्ड क्रिकेट टिमका लागि योगदान दिइरहेका ३३ वर्षीय पोटरफिल्डले यसपटको छनोट चरणमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। आयरल्यान्डका कप्तानसमेत रहेका उनले विश्वकप छनोटमा पपुवा न्युगिनी विरुद्ध शतक प्रहार गर्ने क्रममा उनले १ सय ११ रन जोडे। अर्को खेलमा उनले युएईविरूद्ध ९२ रनको पारी खेले। नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध ४७ रन प्रहार गरेका उनी वेस्ट इन्डिज विरुद्ध डकआउट भएका थिए।
Image result for Tony Ura (Papua New Guinea)
विश्वकप छनोटको आफ्नो दोस्रो खेलमा आयरल्यान्ड विरुद्ध शतक प्रहार गरेका उराले उराले १ सय ५१ प्रहार गरे। नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध ३७ रन प्रहार गरेका उनी वेस्ट इन्डिज विरुद्ध ३ रनमै आउट भएका थिए।
Image result for Calum MacLeod (Scotland)
स्कटल्यान्डका टपअर्डर ब्याट्सम्यान म्याकलियोर्डले पहिलो खेलमा अफगानिस्तान विरुद्ध नटआउट १ सय ५७ रन प्रहार गर्दै प्रतियोगितामा उत्कृष्ट सुरूवात गरे पनि समूह चरणका पछिल्ला तीन खेलमा राम्रो खेल्न सकेनन्।
समूह चरणमा उत्कृष्ट ब्याटिङ गरेका टेलरले पहिलो खेलमा नेपालविरुद्ध ९१ बलमा शतक बनाएका थिए भने अफगानिस्तान विरुद्ध ९१ रन बनाए।
यस्तै हङकङ विरुद्ध ४६ रन बनाएका उनले स्कटल्यान्ड विरुद्धको अन्तिम खेलमा ४४ रन प्रहार गरेका थिए। उनले समूह चरणको ४ खेलमा कुल २ सय ७९ रन जोडे।
समूह चरणमा नेपालका कप्तान पारस खड्काले तारिफयोग्य ब्याटिङ गरे। दुई अर्धशतक प्रहार गरेका उनले स्कटल्यान्ड विरुद्ध ६३ तथा अफगानिस्तान विरुद्ध ७५ रन प्रहार गरे। यसअघि जिम्बावे विरुद्धको पहिलो खेलमा उनले ४० रन जोडे। सोमबार हङकङ विरुद्ध ११ रनमै आउट भएका उनले बलिङ पनि राम्रो गरेका थिए।
पपुवा न्युगिनी विरुद्धको पहिलो खेलमा ९४ रन बनाएका युएईका कप्तान मुस्ताफाले बाँकी ३ खेलमा भने उनले राम्रो ब्याटिङ गर्न सकेनन्। यद्यपी उनले नेदरल्यान्ड्स विरुद्धको खेलमा उत्कृष्ट बलिङ गरेर उनले ५ विकेट लिएपछि युएईले नेदरल्यान्ड्सलाई ६ विकेटले हराउँदै सुपरसिक्समा प्रवेश गर्‍यो।
वेस्ट इन्डिजले समूह चरणमा चार वटै खेल जितेर आफ्नो क्षमता देखाइसकेको छ। नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध नखेलेका वेष्ट इन्डिजका कप्तान होल्डरको युएईविरुद्ध ५ विकेट लिए। पिएनजी विरुद्ध ९९ रन बनाएका होल्डरले आयरल्यान्ड विरुद्ध २ विकेट लिनुका साथै ५४ रन बनाए।
इसान खान (हङकङ)
आफूले खेलेका सबै खेलमा विकेट लिएका हङकङका अफ स्पिनर खानले स्कटल्यान्ड विरुद्ध ३/२९, अफगानिस्तान विरुद्ध ४/३३, जिम्बावे विरुद्ध २/५१ र नेपाल विरुद्ध २/३४ को स्पेलमा बलिङ गरे।
समूह चरणमा ११ विकेट लिएका उनी सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीको शीर्ष स्थानमा छन्। उनलाई आइसिसिले उत्कृष्ट ११ को सूचीमा राखेको छ।